Sheekh Shariif oo markale ka digey Muddo Kororsi - Jowhar somali news leader
By Mahad	 Last updated Feb 8, 2021
Hoggaamiyayaasha musharrixiinta mucaaradka Shariif Sheekh Axmed oo galabta shir jar’aaid ku qabtay Muqdisho, ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo ay muddadii ka dhammaatay, waxayna ku tilmaameen nasiib darro inaan lagu heshiin qaabkii doorasho waddanka uga dhici lahayd.
Shariif Sheekh Axmed Madaxweynihii hore ee dalka ayaa sheegay inaan la aamini karin in madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee Farmaajo uu dalka ka qaban karo doorasho, sida uu hadalka u dhigay.
“Madaxweynaha iyo hay’adaha dowladda, markii uu ka dhammaado muddo xileedkooda, amarada ay bixinayaan iyo sida ay u dhaqmayaan waxaa ay noqonayaan kuwo khilaafsan sharciga” ayuu yiri Sheekh Shariif.
“Waxaan ka digeynaa muddo kororsi aan lagu heshiin, markasta muddo kororsi wuu imaanaysaa, laakiin waxa la kordhinaayo iyo waxa la qabanaayo waqtigooda inay caddahay ayaa loo baahanyahay”.
Dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah Musharaxiinta Madaxweynaha dalka ayaa sheegay in Farmaajo uu ku fashilmay in dalka uu ka qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda, isla markaana heshiis la gaari waayay Madaxda dowlad Goboleedyada, xili laga sugayay inuu heshiis Madaxda kala gaaro doorashada.
Waxaa uu ku eedeeyay Farmaajo inuu doonayo muddo kororsi uu sameeyo, kadib markii uu dhammaaday muddo xileedkiisa, hayeeshee taas marnaba aysan aqbali doonin Musharaxiinta, uuna qaadayo Mas’uuliyada wax kasta oo tallaabadaas ka yimaada.
Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay shaaciyay in Farmaajo aysan u aqoonsaneyn Madaxweynaha dowladda Federaalka, isla markaana uu dhammaaday muddo xileedkiisa dastuuriga aheyd ee afarta sano.
Romanian opera star Gheorghiu performing for New York Met musicians